Gay DJ on police wanted list after raping 4 men – Makuhwa.co.zw
“Kuno kwaipa, varume havasisina mufaro sezvo vari kubatwa nemurume anova DJ ane mbiri uyu. Kudoro chaiko, ringava rekubhawa kana rematanda, vava kudzokako kunze kuri kuchena vari muzvikwata zvevarume vanodarika vana kana vashanu nekuti nhubu iyi inonzi ine simba rinotyisa. Murume akangofamba oga anobatwa obvumburudzwa pamadiro,” vatori venhau vakaudzwa. Tangwena anonzi kana ave kuda kunoita mabasa ake anopfeka marokwe marefu, zvikuru machena, zvekuti varume vaanosangana navo vanofunga kuti munhukadzi.
Takakwanisa kutaura nemumwe wevanonzi vakabatwa chibharo naTangwena, zita tinaro, uyo ane makore 18 okuzvarwa uye achigara mubhuku rekwaTangwena.
“Pandakacheuka achiti ko aiva nemombe idzo ndiyani, akabva andibata nechisimba nekumashure ndokuburitsa banga achiti anoda kundiita mukadzi ini ndikaramba. Akazonongedzera banga iri pachipfuva tichirwisana chete apo aindiruma musana nepachipfuva, padumbu nepazamu ini ndichiramba. Semunhu ndakanga ndisina kupfeka pant, akazopinza mawoko ake mukati mechikabudura ndokudzvanya-dzvanya nhengo dzangu dzakavandika nekudzisvina kudzimara ndaona nyenyedzi nekurwadziwa ndokupera simba.
Related Topics:disc jockeykuBuheraMurambinda
Bhokisi rechitunha ‘muroad’ . . . Rakakandwa mumugwagwa waHarare Drive